Valian’ny Nosy Faroe Ifarimbonana Ny Google Translate · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Oktobra 2017 5:15 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, عربي, Français, Español, Ελληνικά, русский, 繁體中文, English, Català, English
Pikantsary tao amin'ny tranonkala Faroe Islands Translate. Sary namboarin'i Nevin Thompson.
Inona no ataonao rehefa tsy hita ao amin'ny Google Translate ny tenim-pirenenao? Raha Nosy Faroe ianao, mifarimbona manangona fotsiny ny vahaolanareo manokana ianareo.
Tranonkala mahafinaritra sy mahaliana ny Faroe Islands Translate, izay noforonin'ny Visit Faroe Islands, manampahefanan'ny fizahan-tany ho an'ny nosy, sy ny Atlantic Airways, seranam-piaramanidina ofisialin'ny firenena. Ao amin'ny tranonkala, asehon'ireo olona ao an-toerana fa ampiasaina amin'ny fiteny Faroezy, fiteny ofisialy ao amin'ny firenena ireo teny sy fehezanteny iombonana (tsy tena iombonana tanteraka ) avy amin'ny fiteny samihafa – anisan'izany ny teny Anglisy, Espaniôla ary Frantsay:
Ao amin'ny tranokalanay, mandika teny na fehezanteny mivantana maimaim-poana ireo Faroezy mpilatsaka an-tsitrapo. Tsotra fotsiny. Manoratra ianao, ary handika izany amin'ny alalan'ny fandefasana mivantana ny dikanteny izay nalaina sary tamin'ny finday raitran-dry zareo ny mpirotsaka an-tsitrapo Faroezy izay sendra izany.
Matetika mahamiramirana ny vokatra azo amin'ity tetikasa ity
Pikantsary tao amin'ny Faroe Islands Translate. Tsindrio raha hijery ny dikanteny.
Satria ifarimbonana avy amin'ny aterineto avokoa ny fangatahana fandikan-teny, manasongadina fehezanteny maro samihafa amin'ny teny Faroezy ny tranonkala, ahitana fangatahana fanoroana lalana hatramin'ny fangatahana fihaonana amin'ny mponin'ny nosy Faroe. Misaotra ny tranonkala fa na amin'ny firy na amin'ny firy mandritra ny andro, misy olona vonona handika teny foana ho anao eo noho eo.
Ahitana vondro-nosy miorina ao amin'ny Ranomasimbe Atlantika ka hatrany avaratr'i Ekaosy ny Nosy Faroe. Firenena mizaka tena ao amin'ny fanjakan'i Danemarka, ny Nosy Faroe ary manana mponina 50.000 eo ho eo, ka mahatonga ny teny Faroezy ho fiteny vitsy an'isa sy fanamby ho an'ny Google Translate.
Eo anivon'ny mponina amin'ny fotoana feno ao amin'ny nosy sy ny mponin'ny nosy monina ankehitriny ao amin'ny faritra hafa amin'izao tontolo izao, eo amin'ny 75,000 eo ireo mpampiasa ny teny Faroezy. Avy amin'ny fiteny Norse Tandrefana Tranainy izay nampiasain'ireo mpiori-ponenana Norse tonga tao amin'ireo nosy tamin'ny taonjato faha-9 ny fitenin'ny vondro-nosy.
Tsy vao voalohany izao no niorenan'ny Faroe Islanders ara-bakiteny tao amin'ny sarintany. Tamin'ny taona 2016, noho ny firenen'izy ireo mbola tsy nipoitra tao amin'ny Google Street View, nanapa-kevitra hanangana ny Sheepview360 ny komitin'ny fizahantany. Nametrahana fakantsary 360 degre mba ahafahany maka sary manodidina ny firenena iray manontolo ny dimy tamin'ireo sambon'ny nosy. Fotoana fohy taorian'izay,, nasehoan'i Google Maps ny sarin'i Nosy Faroe.
Anjaran'ny Google Translate ankehitriny ny maka ireo marani-tsaina ao amin'ny nosy, mpitady vahaolana manokana.